हिमानीलाई भेटेपछि अभिनेत्री मनीषा लेख्छिन्, 'विश्वलाई सशक्त महिलाको खाँचो छ!' - Entertainment News Nepal - Celebrity News & Gossips
हिमानीलाई भेटेपछि अभिनेत्री मनीषा लेख्छिन्, 'विश्वलाई सशक्त महिलाको खाँचो छ!'
अभिनेत्री मनीषा कोइराला र पूर्वयुवराज्ञी हिमानी शाहबीच काठमाडौंस्थित महाराजगञ्जमा भेटघाट भएको छ ।
शनिबार राती भएको भएको भेटघाटमा मनीषा र हिमानीले सँगै रात्रीभोज गरेका थिए। आफूनिकट पारिवारिक जमघटमा उनीहरुले एकअर्काबीच कुराकानी गरेका थिए। अहिले सामाजिक संजालमा हिमानी र मनीषाका तस्वीर सार्वजनिक भएका छन् ।
हिमानीसँगको भेटघाट मनीषाले सामाजिक सञ्जालमा तस्वीर राख्दै ‘विश्वलाई सशक्त महिलाहरूको खाँचो छ, जसले अरूलाई अगाडि बढ्न र बनाउन मद्दत गर्छन् । जसले अरूलाई माया गर्न र अरूबाट माया पाउन सक्छन् । महिला जसमा नम्रता र उग्रता दुवै क्षमता हुन्छन् ।’ म्युजिक थेरापिस्ट एमी टेन्नीको भनाई उध्दृत गर्दै लेखेकी छन् ।
मनीषाले भेटघाटमा के विषयमा छलफल भयो भन्ने केही खुलाएकी छैनन् । यद्यपि मनीषा पछिल्लोपटक राजनीतिमा आउन लागेको खबरले सबैलाई चासोको विषय बनेको थियो । यता पूर्व युवराज्ञी हिमानी पछिल्ला वर्षहरुमा हिमानी ट्रस्टमार्फत सामाजिक काममा सक्रिय छिन् ।
बुटवल उपमहानगरपालिकाको सक्रियता, अक्सिजनको अभावका बेला...
eNewsnepal May 4, 2021
eNewsnepal Jan 2, 2020
eNewsnepal Jul 20, 2020
सैनामैनाका किसानलाई अनुदानमा मिनिटेलर
eNewsnepal Apr 30, 2020
चन्द समूहलाई संवैधानिक दायरामा आउन प्रधानमन्त्री ओलीको...
eNewsnepal Mar 22, 2019
नयाँ शक्ति नेपाल र फोरम बिच वैशाख २३ पार्टी एकता हुने
eNewsnepal May 4, 2019
फिल्मको सुटिङका क्रममा दुर्घटनामा परे विराज भट्ट, सुटिङ...
फिल्मको सुटिङका क्रममा दुर्घटनामा परे विराज भट्ट, फिल्मको सुटिङ नै प्रभावित
eNewsnepal Feb 11, 2019
eNewsnepal Dec 18, 2019
पोखरामा मौसम बिग्रेपछि दुई हेलिकप्टर खेल मैदानमा अकस्मात अवतरण
खेलकुदमा बजेट बढ्यो, मुलपानीलाई १० करोड बिनियोजन
#मनाङ #आगो #नियन्त्रण
#ट्राफिक #जरिवाना #मोबाइल #जरिवाना
#विवाह #नगर्दा #बहिनीको #हत्या
#सुनको #जलहरी #लगाउने #निर्णयविरुद्ध #सर्वोच्चमा #रिट
nepali son g
hami desh bachau
#राष्ट्र #कल्याण #संकल्प
काम नपाएर अब कोही नेपाली बिदेश जानु पर्दैन : प्रधानमन्त्री...